Oclean W10 Mvura Inobhururuka - Wako Wemazino | TeraNews.net
Munyori Kravets Pavel Yakabudiswa pa 12.10.2021
Wanga uchiziva here kuti kugara uchishandisa mazino floss kunokanganisa mamiriro emazino. Kushambadzira kunokurudzira, asi vanachiremba vemazino vanorambidza. Mushure mezvose, iyo tambo inokwenya kumucheto kwezino, ichigadzira maburi mune iro dombo rakaumbwa. Asi pane nzira yekubuda - unogona kutenga chinodiridza. Chiremba wemazino weAmerica Gerard Moyer, muna 1959, akagadzira mini-hose iyo yakabatsira vashandisi kutaura zvakanaka kune caries zvachose. Iyo Oclean W10 Water Flosser irrigator mhinduro yakasarudzika yatinoda kukuzivisa iwe. Chokwadi, pamusoro pekugeza mazino, nharembozha inogona kukwiza mazino nekuchenesa rurimi.
Nei uchida Oclean W10 Water Flosser irrigator
Pasina kupokana, bhurasho rezino ndiyo nzira yakanakisa yekuchenesa mazino ako kakawanda zuva rega rega. Ichi ichokwadi chisingarambike icho chero chiremba wemazino achasimbisa. Asi zvekuita nemarara echikafu uye utachiona huri munzvimbo ine rima. Iko brush rakatadza kusvika. Iwe unogona kushambidza muromo wako zvakakwana. 10-15 nguva. Nenhamburiko yakakosha yekugadzira yakaringana kumanikidza kugeza zvese zvaiswa pamazino.
Iyo yemadiridziro yakagadzirirwa kurerutsa basa. Chigadzirwa chinokwanisa kugadzira rwizi rwakamanikana rwemvura pasi pesimba rakanyanya. Sachigaro wemazino. Iyo inodiridza iri nyore kumisikidza uye kushanda. Iwe unogona kuchinja yekuchenesa mhedzisiro, gadzirisa kumanikidza kana kumanikidza frequency. Kuchenesa mukanwa wemuromo kubva kuhutachiona uye marara ezvekudya, iyo Oclean W10 Water Flosser irrigator inoita mamwe maviri anobatsira mabasa:
Massage matadza. Pombi nyoro inoshandiswa, izvo zvinoita kuti jeti remvura riwedzere. Kukwiza matadza kunokosha kupa midzi yezino nezvinovaka muviri. Kuonda meno enamel chirwere chevakuru vese vasingatarise nemuromo mhango. Asi izvi zvinogona kudzivirirwa, kana dambudziko riripo rinogona kubviswa.
Kuchenesa rurimi. Maitiro acho anodikanwa kwete kune vese vashandisi, asi kune mashoma akasarudzwa. Avo vane mitswe yakadzika pamusoro penzvimbo yerurimi. Utachiona hunounganidza mavari uye hunoburitsa hwema hunobva mumuromo.
Water floss (Oclean W10 Water Flosser) iri nyore pakurapa plaque uye gingivitis. Kana iwe ukashandisa chinodiridzira zuva nezuva, unogona kuregera kushanya kwese kwachiremba wemazino. Tichifunga nezve mutengo wemazino masevhisi, chishandiso chinotaridzika kuve chinokwezva.
Ndezvipi zvakanakira iyo Oclean W10 Water Flosser irrigator
Mugadziri anofanira kupihwa kiredhiti. Chigadzirwa hachisi chekuita chete, asi zvakare chiri nyore uye chakagadzirwa mune yakanakisa dhizaini. Kuitwa kwacho kwakanakisa, zviri pachena kuti nyanzvi mumunda wavo dzakashanda paOclean W10 Water Flosser:
Dhizaini dhizaini. Yakaomeswa uye yakatsetseka base, kurema uremu, nyore kugadzirisa. Inotsemurwa tangi remvura, yakasununguka ruoko tambo. Dhamu rinobviswa rinongodiwa chete pakutsvaira. Kuzadza kwemvura kunoitwa kuburikidza nemuromo kumusoro kwechigadzirwa. Kune mabhatani ekudzora (switching uye kusarudza iyo zino kukwesha maitiro). Nenzira, iyo Oclean W10 yemadiridziro yakagamuchira dhizaini kuzivikanwa kubva kuIF uye YENYIKA DESIGN INDEX. Uye zvakare, vakave mukundi weiyo Reddot vhezheni muna 2021.
High kuchenesa kunyatsoshanda. Iyo Oclean W10 yemadiridziro inoshandisa isina mabhureti mota yemagineti. Iyo inokwanisa kugadzira inosvika mazana gumi nemana emapoinzi paminiti ye 1400 mm jet yemvura. Iyo inogadzira inosimbirira kuti mushandisi, kwenguva yekutanga yekuchenesa, shandisa iyo "nyoro" kana "pakudiwa" maitiro. Izvi zvinodikanwa kuitira kuti marini ajekerwe kune jeti ine simba yemvura.
Iko kune mashanu ekutsvaira modes uye mana mabrashi misoro inosanganisirwa. Kuti ubudirire kuchenesa mukanwa, nzira "dzakasimba", "standard", "nyoro", "pulsating" uye "pakudiwa" zvinopihwa. Musiyano mukumanikidza kwemvura uye kupomba kwehuwandu paminiti. Zvipfeko zvinoda kusarudza mamiriro ekuchenesa. Kune mazino, brace, rurimi. Sezvambotaurwa pamusoro apa, zvinyoro uye pane zvinodiwa modhi zvinokurudzirwa kune vese vanotanga. Ipapo, iwe unogona kutamba nedzimwe nzira uye uwane yakanyanya kunaka.
Kuzvimiririra kwakakwirira uye nyore. Iyo yakavakirwa-mukati bhatiri, rechargeable kuburikidza neyakajairwa USB Type-C chiteshi, inopa simba Oclean W10 kudiridza kweanosvika kumavhiki mana pane imwechete kubhadharisa. Iko kune timer ine 4-yechipiri chiyeuchidzo yekushandura nzvimbo yekuchenesa.
Kwokutenga Oclean W10 Water Flosser irrigator
Kubva Gumiguru 11, kukwidziridzwa kwevatengi vese kunotanga paAliExpress yekutengesa chikuva. Chinokosha ndechekuti unogona kutenga Dirita yeOclean W10 nemutengo we$49.99 (yekutanga $59.99). Iyo 15% discounts inoshanda kusvika Gumiguru 15, 2021. Waranti yemugadziri weiyo "tambo yemvura" mudziyo ndeye makore maviri.
Pamusoro pekusimudzira kukuru, kune mibayiro inofadza kubva kukambani:
Vatengi vekutanga mazana matatu vanogashira bhuti remazino remagetsi (Oclean F300 Sonic Electric Toothbrush);
50 vatengi vasina kujairika vakaita odha kubva muna Gumiguru 11-15 vanogashira iyo Oclean W10 yemadiridziro mahara.
50 vatengi vazhinji vanogashira sanitizer yemaoko (80 ml).
Iko kune macomponi ekudzikisa vatengi kubva kuRussia:
OWTT500 Tenga pamusoro pe2490 RUB - Discount 500 RUB.
WOWHIT500 Tenga pamusoro pe2999 rubles - Discount 500 rubles.
WOWHIT550 Tenga kubva ku3599 rubles - Discount 550 rubles.
WOWHIT650 Kutenga Kubva 5999 rubles - Discount 650 rubles.
WOWHIT1000 Kutenga Kupfuura 9999 rubles -Discount chiuru rubles.
Mutengo mushure mekudzikisirwa uchave - $44.99... Unogona kutenga iyo Oclean W10 Water Flosser irrigator neichi chinobatanidza.
Bolts Smart Screw Connection neWi-Fi
Starlink inotangisa Portability sevhisi yemota
Microsoft Open Source 3D Movie Mugadziri
TV-bhokisi X10 MAX Plus 4/64 pane iyo AMLOGIC S905X3
Apple Arcade inopa mitambo mitsva pane chitoro cheapp
AntMiner A3 Siacoin: kutanga kwemugodhi weSIA